(trg)="1"> Ucwangciso - ntsapho — Imbono YamaKristu
(trg)="2"> NGOWE - 1974 kwiNgqungquthela yokuqala Yehlabathi Ngemibandela Yabemi , amazwe ali - 140 awayelapho agqiba kwelokuba zonke izibini ezitshatileyo “ zinelungelo elisisiseko lokugqiba ngokukhululekileyo nangokunembopheleleko ngenani nangethuba eliphakathi kokufumana abantwana nelokufumana inkcazelo , imfundo nezinto zokwenjenjalo . ”
(trg)="3"> Abaninzi basigqala eso sigqibo njengesilungileyo .
(trg)="4"> Kuyinyaniso ukuba , uThixo waxelela uAdam noEva waza kamva waxelela intsapho kaNowa oku , “ qhamani , nande , niwuzalise umhlaba , ” kodwa awukho umthetho onjalo owawunikelwe kumaKristu .
(trg)="5"> IZibhalo azizikhuthazi izibini ezingamaKristu ukuba zibe nabantwana zingatsho nokuba mazingabi nabo .
(trg)="6"> Izibini ezitshatileyo zisenokuzenzela izigqibo zokuba zibe nabantwana okanye zingabi nabo zize , ukuba ziceba ukuba nabantwana , zigqibe ngenani nexesha eziya kubafumana ngalo .
(trg)="7"> Imbopheleleko Enikelwe NguThixo
(trg)="8"> Noko ke , ngaba uye waphawula ukuba ingxelo kwiNgqungquthela Yehlabathi Ngemibandela Yabemi yathi izibini ezitshatileyo zifanele zenze isigqibo “ ngokunembopheleleko ngenani nangethuba eliphakathi kokufumana abantwana ” ?
(trg)="9"> Kwakhona lo mgaqo ungembopheleleko ukwavisisana neBhayibhile .
(trg)="10"> Abazali abangamaKristu bayaqonda ukuba nakubeni abantwana besisipho esixabisekileyo esivela kuThixo , eso sipho sihamba nembopheleleko enkulu .
(trg)="11"> Okokuqala , kukho imbopheleleko yokunyamekela abantwana ngezinto eziphathekayo .
(trg)="12"> IBhayibhile ithi : “ Ukuba ke umntu akabakhathelele abakhe , ngokukodwa abendlu yakhe , ulukhanyele ukholo , unobubi ngaphezu kongakholwayo . ” — 1 Timoti 5 : 8 .
(trg)="13"> Ukulungiselela intsapho kabani kubandakanya okungakumbi kunokubeka nje ukutya etafileni nokuhlawula amatyala , nakubeni oku ngokufuthi kungumsebenzi omkhulu kukodwa .
(trg)="14"> Izibini ezitshatileyo ezingamaKristu eziyikhathaleleyo imbopheleleko , ekucebeni ubukhulu beentsapho zazo , ziqwalasela impilo - ntle kamama engokwasemzimbeni ndawonye nempilo - ntle yakhe engokweemvakalelo , engokwasengqondweni neyokomoya .
(trg)="15"> Ukunyamekela umntwana kuthabatha ixesha elininzi kakhulu , yaye xa abantwana bengumkrozo omnye emva komnye , oomama ngokufuthi bancama kungekuphela nje ixesha labo lokuphumla , lokuzihlaziya , lenkqubela phambili yobuqu nelokubandakanyeka kwimisebenzi yobuKristu kodwa kwanempilo engokwasemzimbeni neyokomoya .
(trg)="16"> Abazali abangamaKristu abayikhathaleleyo imbopheleleko yabo bakwaqwalasela iintswelo zabantwana babo .
(trg)="17"> IThe State of the World’s Population 1991 ithi : “ Abantwana abazelwe bebaninzi , kwiintsapho apho abantwana bangxulelwayo kuye kufuneke baphangelane nabantakwabo noodade wabo ngokutya , bakhuphisane ngempahla baze bamonelane ngokuthandwa ngabazali .
(trg)="18"> Kukwayinto elula ngokungakumbi ukuba bangenwe zizifo ezasulelayo .
(trg)="19"> Ukuba aba bantwana bayasinda kwiminyaka yabo yobuntwana yokuchanabeka , kunokwenzeka ngakumbi ukuba badodobale ekukhuleni yaye ukukhula kwabo ngokwasengqondweni kuphazamiseke .
(trg)="20"> Amathemba aba bantwana xa bengabantu abakhulu amfiliba kakhulu . ”
(trg)="21"> Kambe ke , oku akunjalo kuzo zonke iintsapho ezinkulu , kodwa yinto izibini ezitshatileyo ezingamaKristu ezifanele ziyiqwalasele xa zicwangcisa inani labantwana eziza kuba nabo .
(trg)="22"> Abazali abangamaKristu banembopheleleko yokunyamekela abantwana babo ngokomoya , njengoko iBhayibhile iyalela : “ Nani boyise , musani ukubacaphukisa abantwana benu ; bondleleni ekuqeqesheni nasekululekeni kweNkosi . ” — Efese 6 : 4 .
(trg)="23"> UEmeka , umKristu ongumhlohli wezomthetho eNigeria , unonyaka etshatile yaye akakungxamelanga ukuba nguyise wentsapho enkulu .
(trg)="24"> “ Mna nomkam siye saxubusha ngenani labantwana esiya kuba nabo .
(trg)="25"> Siye sacinga ngokuba nabahlanu kodwa sigqibe kwelokuba babe bathathu .
(trg)="26"> Kamva sigqibe kwelokuba ababini baya kuba balunge ngakumbi .
(trg)="27"> Ukukhulisa abantwana ngokwemigaqo yeBhayibhile akuyondlwan ’ iyanetha .
(trg)="28"> Kuyimbopheleleko enkulu . ”
(trg)="29"> Zimbi izibini ezitshatileyo ezingamaKristu ziye zagqiba kwelokuba zingabi nabantwana ukuze zinikele lonke ixesha lazo ekukhonzeni uThixo .
(trg)="30"> Omnye umvangeli wasemazweni eAfrika owavumelana nomyeni wakhe ukuba bahlale bengenabantwana wathi : “ Andivakalelwa ngokungathi kukho into endiphosayo ngokungabi nabantwana .
(trg)="31"> Nangona mna nomyeni wam singakhange sibe novuyo lokuba ngabazali , ubomi bethu bebuzeliswe zezinye izinto ezivuyisayo .
(trg)="32"> Ngokubandakanyeka ekuncedeni abanye bafunde inyaniso yeBhayibhile , sinabantwana bokomoya kwiindawo ezininzi zehlabathi .
(trg)="33"> Siyabathanda , yaye nabo bayasithanda .
(trg)="34"> Kukho umanyano olukhethekileyo phakathi kwethu .
(trg)="35"> Ngesizathu esilungileyo , umpostile uPawulos wazifanisa nomdlezana ngenxa yothando awayenalo ngabo wayebancedile ngokomoya . ” — 1 Tesalonika 2 : 7 , 8 .
(trg)="36"> Uqingqo - nzala
(trg)="37"> Ngaba iBhayibhile iyalwalela uqingqo - nzala ?
(trg)="38"> Hayi , ayilwaleli .
(trg)="39"> Ukhetho luyekelwa kwisibini esitshatileyo eso .
(trg)="40"> Ukuba isibini esitshatileyo sigqiba kwelokuba sisebenzise uqingqo - nzala , ukhetho lwaso lwezinto zokuthintela ukukhawula ngumbandela wobuqu .
(trg)="41"> Noko ke , inkqubo yoqingqo - nzala ekhethwa sisibini esitshatileyo esingamaKristu ifanele ilawulwe kukuhlonela ubungcwele bobomi .
(trg)="42"> Ekubeni iBhayibhile ibonisa ukuba ubomi bomntu buqalisa ekukhawulweni , amaKristu ebeya kuziphepha iinkqubo zezinto zokuthintela ukukhawula eziqhomfayo , okanye eziphelisa ubomi bomntwana osakhulayo . — INdumiso 139 : 16 ; thelekisa iEksodus 21 : 22 , 23 ; Yeremiya 1 : 5 .
(trg)="43"> Ngoko ngokufanelekileyo izibini zinokwenza ukhetho olwahlukahlukeneyo xa kufikelelwa kumbandela wocwangciso - ntsapho .
(trg)="44"> Zimbi zisenokunqwenela ukulinganisela inani labantwana eziya kuba nabo .
(trg)="45"> Ezinye , zisebenzisa izinto zokuthintela ukukhawula , zisenokugqiba kwelokuba zingabi nabantwana kwaphela .
(trg)="46"> Iinkqubo ezininzi zoqingqo - nzala ziyafumaneka , nganye ineengenelo neengxaki zayo .
(trg)="47"> Ekwenzeni isigqibo ngenkqubo ezilungeleyo , izibini zifanele zikhumbule ukuba zimbi iinkqubo zisebenza kakhulu kunezinye .
(trg)="48"> Zikwafanele zibuze nangezinto ezizezinye ezinokwenzeka .
(trg)="49"> Oogqirha neekliniki zocwangciso - ntsapho zikulungele ukunikela icebiso mayela neenkqubo zoqingqo - nzala zize zincede izibini ukuba zikhethe eyona inokuhlangabezana neentswelo zazo .
(trg)="50"> Isigqibo isibini esisenzayo sokuba nabantwana abaninzi , abambalwa , okanye ukungabi nabo sesobuqu .
(trg)="51"> Sikwasisigqibo esibalulekileyo esinemiphumo emininzi eyahlukahlukeneyo .
(trg)="52"> Izibini ezitshatileyo bekuya kuba bubulumko ngazo ukuba ziwuhlolisise ngenyameko lo mbandela nangomthandazo .
(trg)="53"> [ Ibhokisi ekwiphepha 30 , 31 ]
(trg)="54"> Iinkqubo Ezaziwayo Zoqingqo - nzala
(trg)="55"> Ukuzenza Idlolo
(trg)="56"> Emadodeni : Inkqubo yotyando olungephi apho kusikwa kancinane isingxobo samasende kuze kuqhawulwe imibhobho ethwala amadlozi .
(trg)="57"> Kumabhinqa : Inkqubo yotyando ekuthi kuyo imibhobho yesibeleko iqhinwe okanye iqhawulwe ukuze kuthintelwe iqanda lingadluleli esibelekweni .
(trg)="58"> Iingenelo : Kuzo zonke iinkqubo zoqingqo - nzala ; ukuzenza idlolo kuyeyona isebenzayo .
(trg)="59"> Iingxaki : Kunokuba sisigxina .
(trg)="60"> Kumadoda nakumabhinqa , utyando luye lwababuyisela kwimeko yokukwazi ukufumana abantwana kwakhona , kodwa oku akunakuqinisekiswa .
(trg)="62"> Iipilisi Zoqingqo - nzala
(trg)="63"> Ezi ziquka iiprogestin - only minipill .
(trg)="64"> Ziphazamisa imilinganiselo eqhelekileyo yokukhutshwa kwencindi yedlala lebhinqa ukuze zithintele iqanda ukuba lingakhuli okanye likhutshwe .
(trg)="66"> Iingenelo : Zisebenza kakhulu ekuthinteleni ukukhulelwa .
(trg)="67"> Iingxaki : Kubakho imiphumo eyiyeminye engokwasemzimbeni kodwa iba mincinane kubantu abangaphantsi kweminyaka engama - 40 abasempilweni abangatshayiyo .
(trg)="68"> IDiaphragm Nezinto Zokubulala Amadlozi
(trg)="69"> Idiaphragm yirabha engqukuva emile okwekomityi etwatyululwa phezu komphetho othambileyo .
(trg)="70"> Emva kokuthambisa ijeli okanye ucwambu olubulala amadlozi ( izinto zokubulala amadlozi ) kuloo nto imile okwekomityi , ifakwa kumjelo oya esibelekweni ukuze ingene ngokujikeleze umlomo wesibeleko .
(trg)="71"> Iingenelo : Luhlobo loqingqo - nzala olukhuselekileyo , oluthembeke ngokupheleleyo xa lusetyenziswe ngokufanelekileyo .
(trg)="72"> Iingxaki : Imele isetyenziswe onke amaxesha isibini sisiba neentlobano zesini .
(trg)="73"> Kufuneka ubuchule ekufakeni esi sixhobo ngokufanelekileyo , yaye sifanele sifakwe ngaphambi kokuba neentlobano zesini size sishiywe apho iiyure ezintandathu ukuya kwezisibhozo emva koko .
(trg)="74"> ICervical Cap
(trg)="75"> Sisixhobo esenziwe ngeplastiki okanye ngerabha esimile okwekomityi nesincinane kunediaphragm .
(trg)="76"> Njengediaphragm , sifakwa phezu komlomo wesibeleko kodwa sona sihlala kakuhle ngakumbi yaye sifuna ucwambu okanye ijeli encinane yokubulala amadlozi .
(trg)="77"> Iingenelo : Esi sivalo siyafana nediaphragm ngendlela esisebenza ngayo , yaye sinokushiywa apho kangangeeyure ezingama - 48 .
(trg)="78"> Akuyomfuneko ukuba kusetyenziswe izinto zokubulala amadlozi xa kuphindwa iintlobano zesini .
(trg)="79"> Iingxaki : Kunzima ngakumbi ukusifaka kunediaphragm , yaye ukuma kwaso phezu komlomo wesibeleko kufanele kuhlolwe ngaphambi nasemva kwesenzo ngasinye seentlobano zesini .
(trg)="80"> Kusenokubakho iingozi zezifo zesibeleko okanye zomlomo wesibeleko .
(trg)="81"> Esi sivalo sifanele sifakwe kuphela ngamabhinqa aye axilongwa umhlaza ( Pap test ) aza afunyanwa engenawo .
(trg)="83"> Esi sisiponji esinezinto zokubulala amadlozi ezixutyiweyo esifakwa kumjelo oya esibelekweni ukuze sigqume umlomo wesibeleko , ngaloo ndlela sivalela amadlozi ngokoqobo nangokwemichiza .
(trg)="84"> Siyakhutshwa emva kokusetyenziswa .
(trg)="85"> Iingenelo : Esi siponji sinokushiywa apho kangangeeyure ezingama - 24 yaye siyasebenza ukuba iintlobano zesini ziye zaphindwa ebudeni belo xesha .
(trg)="86"> Iingxaki : Kuye kwanikelwa ingxelo yokuba oku akuvisisani nemizimba yabathile yaye neemeko ezimbalwa zokuba netoxic shock syndrome .
(trg)="87"> Isixhobo Sokuthintela Ukukhawula
(trg)="88"> Sikwabizwa ngokuba yi - IUD , iloop , okanye icoil , esi sisixhobo sesinyithi okanye seplastiki esifakwa phakathi esibelekweni .
(trg)="89"> Nangona kusekho ukungaqiniseki ngendlela esisebenza ngayo , oogqirha bakholelwa kwelokuba sithintela ukukhawula ngeendlela ezahlukeneyo .
(trg)="90"> Mhlawumbi enye yezi ndlela kukuthintela iqanda elihlangene nedlozi ukuba linganamatheli esibelekweni .
(trg)="91"> Iingenelo : Olu luhlobo loqingqo - nzala oluthembekileyo .
(trg)="92"> Iingxaki : Maxa wambi olu hlobo luphumela ekopheni okanye ekuveni iintlungu , yaye maxa wambi indlela olusebenza ngayo isenokufana nokuqhomfa .
(trg)="95"> Sisingxobo ekufakwa kuso ilungu lesini lendoda ukuze sithintele amadlozi ukuba angangeni kumjelo oya esibelekweni .
(trg)="96"> Iingenelo : Yindlela ekhuselekileyo , esebenzayo yoqingqo - nzala .
(trg)="97"> Inciphisa amathuba okudlulisela izifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini , kuquka uGawulayo .
(trg)="98"> Iingxaki : Bambi abayithandi ngenxa yokuba ukuyisebenzisa kufuna ukuphazanyiswa kweentlobano zesini .
(trg)="100"> Ukukhutshwa kwelungu lesini lendoda kwilungu lesini lomntu obhinqileyo kanye ngaphambi kokuba kuphume amadlozi .